Naxdinta Badbaadada waxay ku dhacdaa 'Trailer' ugaarsiga 'Shudder - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Naxdinta Badbaadada waxay ku dhacdaa 'Trailer' ugaarsiga 'Shudder
Naxdinta Badbaadada waxay ku dhacdaa 'Trailer' ugaarsiga 'Shudder
Trailer-ka Weyn waxay u egtahay waxashnimo xun. Waxay umuuqataa inay qaadanayso sheekada Little Red Riding Hood oo ay dhegta u dhigto. Aniguna waxaan halkaan u joogaa boqolkiiba-kun.
Agaasime aragti dheer, Vincent Paronnaud ayaa caawiya midkan wuxuuna wax ku dhow xagjirnimada Faransiiska ku keenayaa filim Ingiriis ah. Tan ugu xiisaha badan, ninkaan sidoo kale wuxuu ahaa abuuraha filimka cajiibka ah, Persepolis.
Dulucda sheekada Weyn waxay u dhacdaa sidan:
Maxaa ku bilaabmay sidii xod-xodasho shukaansi oo ka dhacday baar ayaa isu rogay halgan nolol ama geeri ah sidii Xaawo (Lucie) Debay) wuxuu noqdaa bartilmaameedka aan la ogeyn ee dhagarta khaldan ee ka dhanka ah iyada. Waxaa lagu qasbay inay cararaan iyadoo laba nin ay ku eryanayaan kaynta, waxay ku riixday xaggeeda iyadoo u halgameysa inay ku noolaato cidlada — laakiin badbaadadu kuma filna Xaawo. Way aarsan doontaa.
Weyn runtii wuxuu calaamado sare ka helay Joe Bob Briggs dhowr todobaad ka dib markii uu ku faanay Twitter-ka filim ku saabsan filim uu run ahaantii qoday oo lagu ciyaarayo wax walba oo Little Red Riding Hood wax ah.
“Shudder wuxuu sii deynayaa asal 14-ka oo ka imanaya midkood France ama Belgium ama Ireland – Ma u sheegi kari waayey – jilayaal aanan weligay maqlin, taas oo sida ugu fiican loogu tilmaami karo Wolf-Creature Stalker Torture Porn, oo leh haween khiyaano iyo khiyaano badbaado. Waa qurux badan tahay.”Ayuu yiri Briggs.
Weyn xiddigaha Jilayaasha Abaalmarinta Magritte ee Lucie Debay (Qirashadii) iyo Arieh Dagaalyahan (Gabar), oo leh Ciaran O'Brien oo soo koobaya jilaayaashii ugu waaweynaa
Noo soo sheeg waxa aad u malaynayso trailer ee qaybta faallooyinka.
Weyn wuxuu imanayaa Shudder bisha Janaayo 14.
Kelly iyo Pablo ayaa imanaya Xun xun: Ciyaarta! Halkan ka akhriso.
WeynLittle Red Riding HoodShudder
Halyeeyga Magaalooyinka Ugu Cagaarshowrsan Mid kasta oo ka mid ah 50ka Gobol Qaybta 9
Taxanaha Amazon 'Waan ogahay waxaad qabatay xagaagii lasoo dhaafay' wuxuu shaaciyey shaashadda